Muse Biixi Ololihiisa Xukuumadda Kulmiye Xero-Jin Bay Gelisay. | Baligubadlemedia.com
Muse Biixi Ololihiisa Xukuumadda Kulmiye Xero-Jin Bay Gelisay.
Waxaa is dadban u muuqata in Xukuumadda Siilaanyo ee shan iyo tobanka cisho u hadhay ee Muse Biixi barbaryaacaysaa inay muuqato inay dhabqis badan oo muujinaya guuldarad a Muse oo ay arinta xukuumadda iyo wasiiradeeda tahay qawda maqashii waxna ha u qaban. Markaad si dhugasho iyo fiirsasho leh khudbadaha wasiirada markay la hadlayaan taageerayaasha kulmiye waxaa kuu muuqanaya buugga yar ee barnaamujka beenbeenta ah prof. SAMATER KU LACAG QAATAY WAXA KU QORAN IYO WAXAY WASIIRADA LABADA USBUUC U HADHAY DADKA U SHEEGAYAAN ISLAMA HAYSTAAN.
xukuumaddu waxay ahayd inay ku taageeraan Mudane Muse Biixi wax qsbadkoodii todobada sano iyo waxqabad soo socda markaa sidaa ma sameeyaan ee si dadban bay Muse u duraan waayo waxay ogyihiin hadduuba Muse Guulaysto inaan meeli uga banaanayn wadanina uga dhaw inay wax helaan. Waxaa kalay yaqiin san yihiin oo ay arkaan bulshada reer Somaliland inay wadato Dr.Cabdirahman gobol kasta waayo horuumar buu Cabdirahmaan muujiyey iyo daacadnomo xad dhaaf ah kadib siduu xisbiga ugu da’da yar cirka muddo yar u gaadhsiiyey, siduu wadaninimada ugu hagar baxay. Sida taariikhdiisu xariirta u tahay, sida laba iyo toban sano uu u hogaaminayey ee isagu hayey baarlamaan mooshin quutayaal ka buuxaan ee xabagta qudha ee isku wadday uu Cabdiraxmaan ahaa.
Waxay ahayd Muse in wuxuu ku wacanyey uun lagu dhiso iyo Wixii Kulmiye gobolo yar ka qabtay in kastay wadanka aafo Kulmiye keenay iyo abaaro ilaahay kulmiye ku soo beegay dhibtoodii haysato oo ah ta Kulmiye looga yaacay: waa Qabyaalad, Musuqmaasaq , Sicirbarar, Suldaan barar, qabiilbarar, danguud oo la boobay , been xadhkii goosatay, madaxtooyadii oo wax aan xummaan ahayn mooyee wanaag ka dheeraatay.
Intaasoo dhan marka la isu geeyo , Muse Xero-jin bay geliyeen ma
rkaa Muse shaydaan baa wata Cirrona Ilaahay baa wata ‘ WAA HADALKII XAMARJI YIDHI SANNADKII HORE OO DHABOOBAY.